सन्तान भन्दा पैसा प्यारो भन्दै करिनालाई गालीको वर्षा ! – Jagaran Nepal
सन्तान भन्दा पैसा प्यारो भन्दै करिनालाई गालीको वर्षा !
बलिउड अभिनेत्री करीना कपुर एक सर्वाधिक चर्चित नायिका हुन् । उनले रिफ्युज़ीबाट वेस्ट डेब्यु फिल्मकी नायिकाबाट अवाड जितेकी थिइन् ।नयाँ फिल्म र फोटोशुटका कारण चर्चामा आइरहने करिना दोस्रो पटक आमा बनेकी छिन् । सन्तानलाई जन्म दिएपछि पनि उनी आफ्नो काममा फर्किएको भनेर चौतर्फी चर्चा भएको थियो ।
आफ्नो पहिरन र कामको कारणले उनले चर्चा भइरहन्छ । कहिले उनले लगाएको लुगा देखि लिएर उनले सेफको सन्तानलाई गरेको मायाले पनि बलिउडमा उनको राम्रै छाप छ ।हुन त उनी कपुर खानदानबाट आएकोले पनि उनको क्रेज हुने नै भयो, ती माथि नवाब परिवारको बुहारी नि परिन् ।
अब बेबो एकपटक फेरि काममा फर्किरहेकी छिन्, उनी जताततै चर्चामा छिन् र प्यापराज्जीको क्यामेरा उनीतर्फ फर्किएका छन्। हालै मात्र करीनालाई शुटबाट निस्किदै गरेको देखिएको छ। यस समयमा उनको ताजा लुक र स्टाइल हेर्न लायकको थियो। करीनाका यी चित्रहरूले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
बेबोको यो ग्रीष्मकालीन लुक मानिसहरूले खुब मन पराइरहेका छन् र प्रशंसा गरिरहेका छन्। तर केही फ्यानहरु भने उनले सन्तानलाई भन्दा बढी पैसालाई माया गरेको बताइरहेका छन् । उनको समर्थनको साथसाथै गाली गर्नेहरुकफ पनि कमी छैन यहाँ । जे होस जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि हासेर उठाउने उनको बानीलाई चै मान्नै पर्छ ।